Dhaleeceyntu waxay jecel yihiin xilliga labaad ee Dickison iyo Aadanaha oo dhan | Waxaan ka socdaa mac
Dhaleeceeyayaashu waxay jecel yihiin xilli-ciyaareedkii labaad ee Dickison iyo Aadanaha oo dhan
Tan iyo bilowgii sanadka, Apple ayaa heleysa magacaabista taxanaha qaar ee laga heli karo Apple TV +, Ted Lasso oo ah taxanihii guusha ugu badan ka soo hoyay tartamadan. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa kuma tiirsana abaalmarinnada taxanaha ama filimku helaan si ay u soo jalleecaan.
Isticmaalayaasha kale waxay ku saleeyaan dhiirigelintooda inay ka daawadaan waxyaabaha cusub fikirka dhaliisha. Dareenkan, waxaan arki karnaa sida Apple ay runtii u fiicneyd labadaba xilli ciyaareedkii labaad Aadmiga oo dhan sida la socota Dickisonmaadaama ay labaduba leeyihiin dhibco muhiim ah 100%.
Haddii aad jeceshahay filimada iyo taxanaha telefishanka, waxaad u badan tahay inaad ogtahay RottenTomato, mid ka mid ah tixraacyada ugu isticmaalka badan adduunka ee malaayiin adeegsadayaal ah labadaba si loo qiimeeyo waxa ku jira iyo in la helo cinwaano cusub.
1 Aadmiga oo dhan
3 Bandhigii Snoopy
Dhibcaha aad ka heshay Dadka oo dhan Tomatometer xilli ciyaareedkiisii ​​labaad waxay taagantahay 100% kadib markay heshay dhibco 18 dhaliil xirfadle.
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanahan waxay heleen dhibco 73% isla degelkan, oo matalaya a koror weyn barbardhigay xilligan cusub.
La rayiga dadweynaha xili cayaareedkan labaad waa 74% halka xili cayaareedkii hore ay heleen 86%.
Dickinson waa nooc kale oo taxane ah oo sidoo kale ahaa 100% waxaa qiimeeyay 23 xirfadle oo dhaliil ah. Haddii aan ka hadalno dhibcaha ay bixiyeen dadweynaha, tan ayaa gaadhay 82%.
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanahan waxaa lagu helay 75% isla barxadda by dhaleecayn iyo 90% dadka isticmaala.
Taxane kale in ayaa sidoo kale helay el 100% dhanka Tomatometer-ka Waa xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Bandhigii Snoopy ee dhaleeceeyayaasha iyo 86% isticmaalayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dhaleeceeyayaashu waxay jecel yihiin xilli-ciyaareedkii labaad ee Dickison iyo Aadanaha oo dhan
Nomad Sport Lunar Gray, Nomad suunka kama dambaysta ah